Mpamatsy ambanin'ny tany sy trano orinasa - Mpanamboatra akanjo ambanin'ny tany Shina
Ny fifehezan-doha dia mitondra pousse panties shaper lifter manosika ny bra pad misondrona ambanin'ny akanjo ambany
Lantelina tsy misy marika amboaram-baventy marika, feno hip-bo, voa andoha. Dantelina kely, feno hatsaram-behivavy, tsara tarehy sy tsy milamina. Azo antoka kokoa ny fitaovan'ny tranobe roa. Solony vita amin'ny elastika, tery ary tery. Teknolojia fananganana tokana, maivana ary tsy misy marika sy mangatsiaka ny lamba.